Boky vaovao Martin Vrijland 'Ny zava-misy araka ny fahitanay azy dia efa vonona ho amin'ny fandefasana! : Martin Vrijland
Boky vaovao Martin Vrijland 'Ny zava-misy araka ny fahitanay azy dia efa vonona ho amin'ny fandefasana!
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 Novambra 2019	• 3 Comments
Tonga ny fotoana farany amin'ilay boky vaovao 'Ny zava-misy araka ny fahitanay azy'. Omaly dia nanolotra ny mpamaky ny boky ho an'ny Ebook Reader (na e-Reader aho raha mila) ary amin'ny dikan-teny PDF. Manomboka izao ny bokin'ny paperback dia azo alaina ihany koa amin'ny alàlan'ny tranokala web boekbestellen.nl ho an'ny vidin'ny € 24,95. Eto ambany dia mbola afaka miditra ary mandray ny dikan-teny e-mamaky sy vakio ny dikan-teny PDF. Tsy manana mpamaky Ebook ve ianao? Avy eo amin'ny ankamaroan'ny PC, solosaina na i-pads dia matetika no mbola afaka mamaky ity doka Ebook Reader ity. Mba hatokisana fotsiny dia ampidiriko koa ny dikan-teny PDF mba hahafahanao mamaky azy an-tserasera amin'ny fitaovana tianao. Azo atao koa izany amin'ny i-Pad na telefaona.
Ity boky ity dia manome famintinana tsara momba ny zava-misy diso sy ny Truman Show collective izay tantanan'ny olombelona amin'ny alàlan'ny fandaharan'asa hatrizay hatrizay. Manome fampahalalana amin'ny an-tsipiriany ny boky, fa ambonin'izany rehetra izany dia misy vahaolana mazava.
Ny olona tsirairay dia mizaka endrika fandaharam-pandrindrana hatramin'ny fandrorohana ka hatramin'ny fasana. Ity boky ity dia mampiseho hoe ahoana no fandrafetana io fandaharana io, ahoana ny fanamboarana ny herin'aratra eo amin'izao tontolo izao sy ny fomba anaovana ny maha-olombelona ao anaty Truman Show iombonana (aorian'ny sarimihetsika mitovy amin'ny 1998) amin'ny fifaneraserana eo amin'ny haino aman-jery, politika ary ny fanoherana voafehy. Izy io dia mamaritra ny zava-misy rehefa jerentsika avy amin'ny maodelin'ny teoria simulation miorina amin'ny 'double slits experiment', fizika fizika ary avy amin'ny fomba fijery. Ny tsy maintsy atao ho an'izay rehetra tafiditra ao anatin'ny fahatsiarovan-tena, finoana, toe-panahy ary politika.
Ny tanjoko dia ny hanoratra boky iray izay azo ampiharina amin'ny iray andro ary azonao omena ny fianakaviana na ny namana mba hampisaintsaina azy ireo. Nahomby izahay. Ahitana pejy 148 ny boky ary mora vakiana ao anatin'ny iray andro.
Raha toa ka lasa mpikamban'ny taona ianao ary te handray ilay boky amin'ny dikan-taratasy, dia andefaso mailaka aho amin'ny adiresinao.
Eto ambany ianao dia afaka misintona ny famoahana Ebook Reader na mamaky ny dikan-teny PDF. Azonao atao ny miditra amin'ireo rakitra roa ireo rehefa lasa mpikambana. Omena volamena sy mpikambana isan-taona isan-taona ny fidirana. Ho an'ireo mpikambana ireo ihany no misy rohy mankany amin'ilay boky eto ambany amin'ity lahatsoratra ity. Ny hafa dia mahita ny bokotra fandraisana anjara. Rehefa lasa mpikambana ianao dia misoratra anarana ho mpamatsy vola ary manohana ahy hanohy ny asako ianao. Misaotra betsaka amin'izany a!
Hanavao ny 5 Novambra 2019, 15: fotoana 30: azonao atao koa ny mandidy ny famoahana ny e-mpamaky sy ny PDF amin'ny alàlan'ny webshop eo ambany bokotra manga.
Raha toa ka nanohana tamin'ny alàlan'ny famindram-bola banky maharitra na mpikambana isam-bolana nandritra ny fotoana vitsivitsy ianao ary te-ho afaka hamaky ilay boky dia azafady mba hifandraisanao aminay amin'ny alàlan'ny contact contact. Ny antony nametrahako io famerana io dia satria ny olona dia afaka mamaky ny bokiko ho an'ny € 2 amin'ny alàlan'ny fahatongavany ho iray volana ary avy eo manafoana ny mpikambana indray.
Tags: boky, de, ny, Featured, kennen, Martin, firenena malalaka, raha ny marina, isika, toy ny
5 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 12
Amin'izany dia tiako ny hiarahaba anao amin'ny faharetanao sy ny fanolorantenanao amin'ny teny mahaleo tena
fa nataonao azon'ny rehetra ampiasaina amin'ny endrika boky.
Raha ny hevitro dia mila fihetsika hentitra sy fahaiza-manao tokoa ianao amin'ny fanarenana
olona tsy nanararaotra hanondro ny habetsahan'ny fanararaotana ataon'izy ireo sy ny fanodikodin'izy ireo
fahefana fatratra ao amin'ity firenena ity sy any amin'ny toerana hafa.
ary miarahaba ny bokinao
6 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 09
Tsy nahavita ny zava-manahirana rehetra tamin'ny 7 taona miraikitra amin'ny tendako ho ahy manokana ary ny atody tsy misy rivotra dia tsy nampaninona ahy izany. Ny mifanohitra amin'izany ... izay lafo be amiko.
Tsy nanoratra boky ho ahy manokana aho fa ho an'ny olona rehetra te-hanana zavatra hanolorany zavatra ho an'ireo izay mahalala ny toe-javatra misy antsika.
6 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 46
Salama Martin, efa nandidy ny bokinao vaovao ve ianao?
Arahabaina ary tohizo hatrany ny fampahalalana! Ilaina fotsiny izany.
« Ireo andrim-panjakana tanora dia mampitabataba ny herisetra satria ny 'fikolokoloana' dia tena fanararaotana tokoa?
Adobe, Twitter ary haino aman-jery mahazatra no hiady amin'ny lalina? »
Total visits: 14.083.365
Riffian op Maninona i Trump dia tsy anti-globalista fa trano aristokrasia hafa
Zandi Eyes op Maninona i Trump dia tsy anti-globalista fa trano aristokrasia hafa
Mifandraisa anjara amin'ny 1.688 hafa